Umfazi wase-Afrika Ogcina imiGca yeZebra, ngu-Banksy | Izidalwa ezikwi-Intanethi
IMali, iBhanki kunye neqwarhashe ukuze bajonge imivumbo yabo
Iibhanki omnye wamagcisa akhoyo ngoku aqokelela owona mdla, ukuze imisebenzi yakhe inyuke njengogwebu kwiindleko kwaye imizobo yakhe isuswe ezitalatweni nakwizakhiwo zeedolophu; Ezi ziboniswa kwimiboniso kwaye zithengiswa kwelona bhidi liphezulu lezigidi zeedola.
Elinye lamaxabiso aphezulu alo mculi wegrafiti yile ubuchule bakhe bokudala kunye neso sipho sokungena kwingqondo yalowo udlulayo, umbono onokuthi ubonakalise amaxesha adlalayo. Olo tshintsho lwendawo yokudibanisa inokufunyanwa kulomzobo upeyintwe ngu-Banksy kwisixeko-dolophu saseTimbuktu eMali.
Le graffiti ibonisa umfazi ehlamba imitya yeqwarhashe, ngelixa ejonge indlela umfazi omdala waseAfrika abaxhoma ngayo kwintambo. Umfanekiso oyile kakhulu onokuthi ube nefuthe kubukrelekrele bethu ekufumaneni isizathu soko.
Abanye banokucinga ukuba uBanksy akangomntu ovela kule planethi ukuba abekho Ndiyakwazi ukubetha ngobugcisa ngale ndlela yokuqonda ubugcisa Kwaye njengaleyo yexeshana, nangona abanye beqhekeza iindonga ukukhusela izimvo zabo, ikwanendima yayo yokufundisa ukuba yonke into ekule planethi inexesha layo.
Umzobi ngubani Kutshanje kuye kwachithwa ukuba ungubani na nguRobert Del Naja, Elinye lamalungu eqela le-hop hop iMassive Attack, eyaziwa kwihlabathi lomculo we-elektroniki.
Inyani yile, njengoko kubonisiwe kulo msebenzi weqwarhashe kunye nomfazi waseAfrika onemigca, U-Banksy ushiya uphawu nakweyiphi na idolophu emhlabeni, njengoko simkile apha kwizihlandlo ezininzi, ukuze abahambi ngeenyawo bafumane ezitalatweni zabo isitampu somntu onobuchule obukhulu, ekuthe ngamanye amaxesha kuthiwe ikwangumbutho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » IMali, iBhanki kunye neqwarhashe ukuze bajonge imivumbo yabo